Izizathu zokungasebenzisi iMicrosoft Windows | Kusuka kuLinux
Izizathu zokungasebenzisi iMicrosoft Windows
Isaka | | I-GNU / Linux
Kunezindatshana eziningi ngokuqhathanisa phakathi kwezinhlelo ezahlukahlukene zokusebenza, njengeWindows, MacOS, GNU / Linux, njll. Kukhona nabanye abaningi abanezizathu zokusebenzisa uhlelo oluthile lokusebenza, kepha kulesi sihloko sizokwethula izizathu eziningana ngalokho akufanele sisebenzise uhlelo olusebenzayo: Microsoft Windows. Lezi zizathu zenziwe zithatha njengenkomba yezinye izinhlelo zokusebenza ezifana nomthombo ovulekile we-UNIX, njengeLinux, FreeBSD, njll.
Kuyiqiniso ukuthi iMicrosoft Windows ine-software eningi engxenyeni yayo, ukuthi kunabashayeli abaningi nokusekelwa okuhle okuvela kubakhiqizi, kubadlali kuyisiteji esinezihloko eziningi, kepha lokho kungenxa yesabelo semakethe esikutholile. Okubaluleke kakhulu, abakhi bemishini abaningi bayifaka kuqala kwimikhiqizo yabo ukuze ifinyelele iningi le- abasebenzisi cishe ngesibopho. Izikole eziningi noma izikhungo zemfundo nazo ziyayisebenzisa, ngakho-ke lapho othile ejwayela, kuba nzima kakhulu ukuyivumelanisa nenye indawo. Ngaphandle kwalezi zinzuzo, kuncane okunye okusetshenziswayo yilolo hlelo lokusebenza futhi kuningi izizathu eziningi zokusebenzisa ezinye izinhlelo ukusebenza. Eqinisweni, kweminye imikhakha lapho umfelandawonye weWintel ungawenzanga lowo monakalo, iWindows ayitholakali neze, njengamaseva, ama-supercomputer, ashumekiwe, njll.
I-Las izizathu zokuthi kungani iWindows kungafanele isetshenziswe Yilezi:
Intengo: ilayisense inenani, ayishibhile nakancane. Ngaphezu kwalokho, isoftware ekhona yale ngxenyekazi nayo ikhokhelwa ezimweni eziningi, ngakho-ke izindleko zikhuphuka kakhulu (ngaphandle kokuthi ziphangiwe, kepha lokho akukho emthethweni ...).
Umnikazi: kuyindawo yokuphathelene, nesoftware yomthombo evaliwe. Kepha ngaphezu kwalokho, isoftware ekhona yale nkundla ivame ukuvalwa. Ngeke ukwazi ukuyiguqula, ngeke ukwazi ukuyisabalalisa futhi okubi nakakhulu, ngeke wazi ukuthi yenzani ncamashi.
Ukuphepha okuphansiIzindawo ze-UNIX zivikeleke kakhulu kune-Windows ngisho nezilungiselelo ezizenzakalelayo. Futhi uma sichitha isikhashana silungiselela futhi sisebenzisa izindlela zokuphepha, zivikeleka ngokwedlulele. Futhi, njengoba zingathandwa kangako, kune-malware encane yazo. Futhi ngenxa yendlela yayo yokuphatha izimvume namalungelo, i-malware ekhona imvamisa ayinankinga kangako futhi uma ukutheleleka kwenzeka kakhulu kungenxa yokwethenjwa ngumsebenzisi, hhayi ngenxa yezimbobo zokuphepha noma ukuba sengozini.
Ukungabi nemfihlo- Ukugcina ubumfihlo bedatha noma imfihlo ku-Windows akunakwenzeka. Ngakolunye uhlangothi, kuma-Linux distros ahlukile, ukuhlanganiswa nokubikwa kwemininingwane yomsebenzisi akuvamisile ukwenziwa ngendlela okwenziwa ngayo kwiWindows. Noma isoftware nezinhlelo eziyibhalayo azonakalisi kangako.
Ukusebenza kabi- Ngokuvamile cishe zonke izinhlelo ezisebenza kahle zisebenza kangcono kuneWindows, kungaba yiLinux, FreeBSD, njll. Bajwayele ukusebenzisa izinsizakusebenza ezingaphansi kakhulu futhi bazinikele kulokho okufunayo ngempela, ukusebenzisa isoftware beshesha kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kunezindawo ezingasindi zedeskithophu, ezilula kakhulu ezingasebenza nakukhompyutha endala noma enezinsiza eziphansi. Ngendlela, engeza lokho, yize ngazi ukuthi mkhulu umsebenzi osuwenziwe ku-NTFS, usaqhubeka nokukhiqiza ukuhlukaniswa kwamafayela, okwenza umshini uhambe kancane futhi uhambe kancane ngokusetshenziswa ... Akwakhelwe ukuhlala isikhathi eside!
Akukho ukuguquguquka: IWindows inendawo eyodwa kuphela yedeskithophu, umphathi wephakheji, i-bootloader, igobolondo (i-CMD noma i-PowerShell kwezinye izinhlobo), umphathi wefayela elilodwa, njll. Uma uyithanda kahle futhi uma ungayithandi, ungayibekezelela… Leyo ifilosofi. Ngakolunye uhlangothi, kwezinye izinhlelo zokusebenza zamahhala ungakhetha phakathi kwezindawo ezahlukahlukene, amagobolondo ahlukene, ama-boot loaders ahlukile, abaphathi bamafayela abahlukene, inani elikhulu lamafayela wefayela (FS), njll. Futhi wenze ngaphandle kwanoma iyiphi yalezi zinto, njengokusebenza kumodi yombhalo, uma ungafuni isikhombimsebenzisi sokuqhafaza. Ayigcini lapho, izinga layo eliphezulu lokulungiselela likwenza liguquguquke ngokwengeziwe, futhi njengoba lingaguqulwa, liyakwazi ukuguquguquka futhi liphatheka kalula.
Ukuzinza Okubi / Ukuqina: IWindows ayizinzile njengoba bekulindelekile, mhlawumbe kubasebenzisi abaningi basekhaya, kepha hhayi eminye imisebenzi. Futhi, akusilo uhlelo oluqinile njengedwala, kepha kunalokho kuyinto ebucayi, ikakhulukazi irejista yayo. Uma kulokho sengeza amaphutha futhi siqalisa kabusha ngenxa yezibuyekezo, kungathukuthelisa. Ngendlela, izibuyekezo ezibonakala zidala izinkinga eziningi muva nje kunokuzilungisa. Kubukeka sengathi abanye balimaze i-WiFi, abanye basusa amafayela omsebenzisi, abanye bashiye amakhompyutha athile engakwazi ukuqala noma ukudala izinkinga zokusebenza, kanti eyokugcina ngoMeyi ibonakala ikhanselwe iMicrosoft ngoba idale amadivayisi e-USB nomfundi ukuthi Amakhadi we-SD ayayeka ukusebenza ...
Ngabe usenakho okunye? Bangu. Ungakhohlwa ukuphawula ...
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Izizathu zokungasebenzisi iMicrosoft Windows
Amazwana ayi-24, shiya okwakho
Ngingakunika uhlu oluhle oluphendula iphuzu ngalinye, kepha kulula ukulifingqa ngokuthi ngeWindows ukushisa kwekhanda kuvame kakhulu ezintweni eziningi. Nginezinsuku lapho ngivuselele khona abashayeli be-NVIDIA ngokuchofoza okungu-2 nokudlala, futhi nginezinsuku lapho kuye kwadingeka ngilahlekelwe yizikhathi zantambama ezimbili ngoba labo bashayeli abafanayo banginike izinkinga kwi-Arch enginayo kwi-laptop. Ngisebenzisa zombili izinhlelo nsuku zonke futhi ngayinye ngenhloso ethile, angizukuqamba amanga uma ngikutshela ukuthi ngisebenza ngokunethezeka kwiLinux.
Ngihlala ngibona ubutha obuningi maqondana neMicrosoft lapho ngikhuluma kulezi zimo. Ngikhetha ukukubona sengathi akuyona yonke into emnyama noma emhlophe, ngicabanga ukuthi ungaphila nobabili ngokuphelele, inkinga ukuguqula yonke into ibe yiBarcelona - iReal Madrid, noma nami noma nami.
Ngichithe isikhathi esithile eManjaro ngisebenzisa abashayeli abangemahhala futhi bengingenankinga ngekhadi lami leNvidia.
Ngibuyele ku-Ubuntu kuphela ngoba angikwazi ukuhlala ngaphandle kwe-Unity.
Christian Guzman kusho
Njengoba ngithi, iLinux ilahlekile izinto eziningi, abantu abaningi ngeke bafake ikhadi labo levidiyo noma enye idivayisi ngokuchofoza okulula oku-2 ku-Linux, ayikho i-suite yamahhala eyenza okwenziwa yi-ms office, izinto eziyisisekelo mhlawumbe yebo, kepha wena Uzizwa uthanda ukusebenzisa ihhovisi elisuka eminyakeni eyi-10-15 edlule, isikhombimsebenzisi esibucayi kusuka enkathini yeWindows 98 futhi ngaphandle kwemisebenzi eminingi emisha; Kuze kube yilapho beza nenye indlela efanayo, esebenziseka kalula, abantu abaningi bazovele babuyele ku-Windows.
Iphuzu lokugcina: imidlalo. Imidlalo eminingi ikuzinkundla ezahlukahlukene ezingahambelani neLinux, futhi abashayeli baphuma nokulungiswa kokusebenza kwemidlalo emisha cishe masonto onke. Weqa isaziso, uthola i-log ngokuthuthuka kwemidlalo ethile, umane ucindezele inkinobho bese konke kuvuselelwa. KuLinux ucishe wahlala kubashayeli bezinyanga eziyi-6 ezedlule ngaphandle kwalokhu kulungiselelwa. Noma ukusho ukuthi imenenja yefayela inobungane kangakanani lapho uxhuma i-pendrive noma enye idrayivu yangaphandle futhi amafayela aphuma nesithonjana sawo uma enawo futhi kuvula iwindi ukuze uwavule. Lezi yizinto ezincane abasebenzisi beLinux abazigcina kude. Endabeni yami, ngidlala kakhulu futhi ngisebenzisa ihhovisi kakhulu. Ungikhipha kanjani lapho?
Phendula uChristian Guzman
Uma kuyimidwebo yeRadeon ingaphansi kokuchofoza okungu-2, ingu-0, awudingi ukufaka noma yini
I-MS Office kusukela ngo-2009 ngiyayizonda, iyesabeka futhi ayikhiqizi amathebhu
Akuwona wonke umuntu ophila ngemidlalo futhi ama-70% ayibamba kuWindows
Ngaphandle kokusebenzisa kahle abashayeli? Uzokusho kuNvidia, ukuthi abashayeli babuhlungu, i-AMD ibavuselela cishe njalo ngesonto futhi bakhululekile
IVulkan izenzakalelayo kwiLinux ngenkathi iMicrosoft ingayifuni ngokungabulali iDirectX
URafa Marquez kusho
I-Linux ilungele yonke into, i-cons yi-libreoffice okuyi-bum encane.
Windows, ungalahlekelwa abashayeli ngoba umshini ngeke usakusebenzela. Ngithenge i-laptop nge-win7 yoqobo, lapho bekufanele ngiyifake futhi ... bengingenayo i-win7 (abakuniki yona) noma i-audio, i-wifi, njll. Ngifaka kubuntu kuyo futhi isebenza kahle.
Phendula uRafa Marquez
Osvaldo marquez kusho
Umbono wami ukuthi ungaphila ngazo zombili izinhlelo zokusebenza, konke kwenzelwe amawindi, isibonelo ukusetshenziswa emsebenzini wami, kunzima kakhulu ukwenza ozakwethu basebenzise i-linux, abakwazi neze ngamawindi, cabanga, ikakhulukazi ku ikhaya lami sisebenzisa i-linux lite ne-sparklinux nama-q4os, ngaphandle kwezingqinamba, noma kunjalo ngicabanga ukuthi bekungeke kube lula ukuhamba ngenye indlela, i-linux ibizothengiswa njengamawindi futhi ngokuqinisekile bazokwakha amagciwane nabanye, kungxenyekazi ye-linux, ukondla imboni ye i-antivirus enkulu impela
Phendula u-Osvaldo Marquez
Bamba iWindows. Uyabona inzondo abanayo ngaye kodwa abasoze bawina.
i-autodesk- alukho uhlelo olusondela kakhulu kulokhu. Okusalungiswa kancane.
i-adobe ngemuva kwemiphumela - woza ... labo abasebenzisa lezi zinhlelo zokusebenza bazi kahle ukuthi ezinye izindlela ku-linux zisezinsaneni zabo (yebo, le blender, kepha lapho ithunyelwa ngaphandle ... kuthatha unyaka ongu-1 uma kuqhathaniswa ne-adobe)
ukubukeka- akukho okufana nokude okufana ne-linux, hhayi i-1 third of the utilities.
hmm ... enye into?
I-PS: NGIYAYITHANDA i-linux, kepha ngiyazi amaphuzu ayo aphansi
Ngokuzimisela ?? Ngivumelana nawe ezimpendulweni ezimbili zokuqala, noma kunjalo futhi kufanele uvume ukuthi isoftware ekhethekile kakhulu, kepha… umbono ??
UneThunderbird njengomphathi weposi, osebenza kahle, ukuphatha oxhumana nabo, amaqembu, amasiginesha wangokwezifiso, ukwenza ngokwezifiso kohlelo lokusebenza (okuthuthuke kakhulu kunombono), izandiso, ikhalenda, ukuphathwa kwemisebenzi, ama-akhawunti amaningi we-imeyili, ukuvumelanisa ne-gmail , ukuphathwa kwe-imeyili ngamathebhu…. futhi ngingaqhubeka. Ngisho ukuseshwa kuphelele kakhulu kune-Outlook, futhi akusikho ukuthi ngiyakusho, engisebenza nabo bakusho besebenzisa uhlelo lokusebenza nsuku zonke kumakhompyutha angaphezu kwama-20.
URichard Gilbert kusho
I-AutoDesk iyonke cishe ayinakuqhathaniswa nochwepheshe nabanye abakhona ku-Linux, ngokwesilinganiso nakwezinye, ayidingeki.
I-Adobe ngemuva kwemiphumela, wuhlelo futhi oluhlelwe ochwepheshe kepha kwiLinux lunabaphikisi abaningi abalusibekele, kufaka phakathi i-blender, esheshayo ku-Linux kune-Windows.
IMicrosoft Outlook, lapha ungalanda ububi bohlelo, ukungaphathwa kahle kwememori, okuhamba kancane, okusindayo futhi okungalifanele ikhaya (okuyinkimbinkimbi uma sikhuluma ngohlobo lobuchwepheshe), umphikisi wakho ngokungangabazeki iThunderbird, Evolution kanye neKmail (ye ochwepheshe) kepha uma ukhuluma nge-Outlook elula, futhi inabaphikisi abanamandla nabalula ku-Linux, ngisho naku-Windows kunezinhlelo ezingcono.
Njengamanje, i-Linux uhlelo olusebenzayo olusetshenziswayo lwabahleli bohlelo, abenzi bamafilimu (ake sibone ama-movie akamuva anemiphumela ekhethekile yokubona ukuthi iLinux yethulwe ngokuqinile), izinkampani ezingxenyeni zokuphatha (ukuzinza kwayo nokuphila kwayo isikhathi eside) futhi endlini (inezinto zakamuva futhi eziyinkimbinkimbi emakethe)
Vele iLinux akuyona impendulo yakho konke okufana neMacOS kepha iyasebenza futhi kahle kakhulu. Konke kuncike kumuntu ophambi kwekhompyutha.
Phendula uRichard Gilbert
Angimelene ne-linux. kodwa ukuqhathanisa kwakho kuyanyanyisa .. Ngizokunikeza lesi sibonelo: uma uzothenga imoto, uyaphi? uyibeke chevrolet ford. Uyayikhokhela imoto futhi uyazi ukuthi uma unezinkinga ngayo ngolunye usuku ngoba uyisebenzise kabi, unabesekeli nabantu abakhona ukulungisa leyo moto ... noma ukhetha ukuthenga imoto yamahhala ongazi ukuthi yenziwe ngubani, kuthiwani uma shiya ukuze udlale kufanele uncenge ukuthola umakhenikha noma ugesi owenza ukufakelwa ukukuxazululela wena ngoba umfana wenza lezo zinto ngoba enesikhathi samahhala futhi unempilo, futhi akatholakali ngezinkinga zakho. Bese ubheka enye imoto yakwamakhelwane ukuhlangabezana okungenani okudingayo. kodwa kumangaze ukuthi enye imoto yenziwa ngendlela ehluke kakhulu kepha inezingqimba ze-ford noma i-chevrolet. kepha akusilo ngisho uhhafu walokho okuvezwa imfoloko yangempela noma i-chevrolet ..
I-linux inguye futhi ozohlanya ngesayensi yamakhompiyutha .. wonke umuntu uyayibamba .. qamba ukuthi mangaki ama-edishini engiwakhipha amawindi ..
URoberto Ronconi kusho
Enye yezinkinga zobumfihlo ezibalulekile ayikho Windows 10 uhlelo lokusebenza oluqoqa idatha eningi kusuka kubasebenzisi bayo
Phendula uRoberto Ronconi
Izizathu zokungasebenzisi windows i-UnU emubi kepha uma iLinux distros lapho engingasebenzisi khona i-photoshop, i-premiere, i-indesing, i-illustrator, ukudlala nokusakaza i-100%, i-Linux ilungile, ingisizile kakhulu kulwazi nakwikhodi ethile kepha ukusuka lapho ngibe yiyona eyinhloko, cha ngiyabonga, bengingakwazi ukwenza lutho.
Meyi 2, 2019
Ngingumsebenzisi ojwayelekile we-gnu / linux (ikakhulukazi umndeni wakwa-Ubuntu) kusukela ngo-2012. Uma ngithi umsebenzisi ojwayelekile, ngisho umuntu ongalusebenzisi lolu hlobo lohlelo kuma-PC asekhaya. Angiyena "umhloli we-distro," futhi anginalo ulwazi oluningi lwe-Linux ngaphezu kwalokho okudingwa ngumsebenzisi ojwayelekile.
Ngingumlandeli ongenamibandela wesoftware yamahhala nefilosofi yayo ihambelana ngokuphelele nendlela yami yokucabanga. Ngingumklami wezithombe, umthwebuli wezithombe nomdwebi wezithombe. Nsuku zonke ngisebenzisa izinhlelo ezinjengeGimp, Krita, Rawtherapee, Inkscape nesikhathi eside njll. Ngithenga imishini yami yekhompiyutha futhi into yokuqala engihlala ngiyenza ukuyifometha bese ngifaka ukusatshalaliswa kweLubuntu, noma ngabe kuku-i5, impela ngoba ngiyabuthanda ubulula bemvelo yayo yokuqhafaza ye-LXDE, ngaphandle kwemiphumela noma imihlobiso futhi ngaphezu kwakho konke ukwenza ngcono ukusebenza kuze kube sezingeni eliphezulu. Ngamafuphi, angikaze ngisebenzise i-PC yami ukuthola isinkwa sami (ngidlala kuphela ngekhamera yami ye-XD).
Inkinga enginayo ukuthi angiyena usosayensi wamakhompyutha, futhi angiyonjiniyela… into yami ubuciko, futhi uma ngiba nenkinga angazi ukuthi ngibheke ngaphi.
Kade ngangifuna isithangami esisebenzayo se-gnu / Linux isikhathi eside. Angazi ukuthi kuphi…
Ngibuye ngizibuze ukuthi ngabe abasebenzisi beLinux abavamile basebenzisa i-distro eyodwa noma bahlala beshintsha (ngikhathele ukubuyekeza i-OS kaningi ize).
Ikhompyutha yami yi-HP Intel Core i5 (3.40 Ghz) ene-8 Gb ye-RAM.
I-OS Lubuntu 18.04.2 Lts ene-kernel 4.15
Imidwebo yeNvidia Quadro K600 / PCIe / SSE2
Ngisebenzisa ama-hard drive angama-500 Gb, enye yazo ukusindisa umsebenzi wami.
Inkinga enginayo ukuthi ihlala ilenga. Ukuphahlazeka kweGimp, kwesinye isikhathi ukushayisa kweLeafpad, ngisho nePCMANFM ... ngiyisebenzisa ngokunembile ngoba ilula kepha kunezinsuku lapho ngingakwazi ukusebenza kuyakhathaza ngendlela emangalisayo ...
nangaphambilini ngezinguqulo zeLubuntu 14.04, 16.04 akwenzekanga kimi. Angiqondi ukuthi yini efanelekile. Ikhompyutha, uhlelo, uqobo lwami… angazi… Isipiliyoni sami kuLubuntu 18.04 sibi kangangokuba ngiphelelwe yithemba.
Ngisanda kuthenga i-Wacom Mobilestudio Pro (iyi-i7 enkulu) ene-Windows 10, ngisebenzise ama-euro ayi-3000 kuyo futhi iphupho lami ukuyisebenzisela ukufanekisa noKrita ezinhlelweni zeLinux kepha angazi ukuthi ngicabange ini ... iWindows ayingikhuthazi nakancane kepha iyasebenza futhi ubuncane engibucelayo ngohlelo lokusebenza.
Konke engikulindele nazo zonke izinzuzo engizifunde ngeLinux ziya phansi lapho ngivula i-Gimp kwi-PC yedeskithophu yami bese ilenga futhi.
Angilahli kuhlelo lwe-gnu / Linux, kepha ngidinga usizo.
Mhlawumbe uzibuza umbuzo ongafanele. Buza kangcono ukuthi ikuphi ukusatshalaliswa okungcono kakhulu kokufunayo. ILubuntu ayenzelwe ukuthi uyisebenzisela ini. Ngingakhetha Ubuntu Studio, ArtistX noma iDebian enedeskithophu ekhanyayo efana neXfce noma Mate. Gwema "ukukhishwa okugoqekayo" okufana ne-Arch, ngoba ukuvela njalo njalo kufika isikhathi lapho amaphakheji elahlekelwa ukusebenzisana kwawo. Ake sithi "ukukhishwa okukhiphayo" umhloli omuhle kakhulu nguwe. Kepha ngaphezu kwakho konke, cabanga ukuthi izinhlelo zokusebenza zikhona ukukusebenzela hhayi enye indlela ezungezile. Uma ulinganisela ukuthi windows ihlangabezana nokulindela kwakho futhi ungakhohlwa ngokusebenza kwayo bese ugxila emsebenzini wakho ... sebenzisa windows. Uma unokukhathazeka "kwefilosofi" futhi ucabanga ukuthi i-GNU / Linux ifanelwe ithuba nokuthi uhlelo oluthi, ngolwazi oluncane, lunamandla amakhulu, liguquguquke futhi lisebenziseke kune-Windows, bese uqhubeka uzame. Ungakhohlwa ukuthi ngaphandle kohlelo i-hardware nayo iyabalwa. Ngokuqanjwa kwezithombe nemultimedia akukho okungcono kune-OSX, kepha akusebenzi kuwe kuwo wonke amakhompyutha. Sebenzisa okufunayo nokuthi yini okukufanele kakhulu ngoba i-OS ikhona ukwenza impilo yakho ibe lula futhi ingabi yinkimbinkimbi. Iseluleko sami ukuthi ushiye amawindi ayi-10 kwa-Wacom kanye nenye i-try linux distros. Faka, khipha, hlola ukusatshalaliswa, funda ... Kepha qaphela, kuyalutha.
Uma uthi nhlá, inkinga yakho ye-HP ingenxa yomshayeli we-nvidia, kuzodingeka ushintshe umshayeli, uye kubashayeli abengeziwe ukukunikeza ezinye izindlela. Noma kungeyona imininingwane ebaluleke kakhulu kepha mhlawumbe ilungele umshini wakho esikhundleni se-LXDE, ngingaxwayisa i-XFCE (uma sikhuluma ngokusatshalaliswa kweXubuntu).
Izeluleko ezimbili kungenxa yokuthi kwesinye isikhathi ukushayeka okusobala hhayi ikhompyutha, kanye ne-LXDE kuyabekwa eshalofini, ake sithi i-interface iyafa kancane.
Ngiyabonga kakhulu kuqala kunakho konke.
Ngangisebenzisa i-Xubuntu kakhulu ngaphambili, kepha i-XFCE (engiyithandayo) yayinesiphazamisi sesithupha esinokuhlola kuqala kwesithonjana okungangivumeli ukuthi ngisebenze kahle, bekungahlala isikhashana. Kungakho nginqume ukushintshela ku-LXDE futhi ngashintsha iThunar yaba yi-PCMANFM.
Kunoma ikuphi, ngizohlola okushoyo, kungenzeka ukuthi ukungqubuzana kungenxa yemidwebo yeNvidia (bekungeke kube okokuqala okwenzekayo).
Ngiyabonga kakhulu futhi!
Ikhasi leNachete kusho
Sanibonani nonke ekuseni.
Umbono wami: Ngibona le ndatshana njengenye into yokuvutha noma ukubhoka engxenyeni yemikhakha emikhulu yesoftware yamahhala ngokuya ngokubusa okuqhubekayo kweWindows kwiPC. Kepha iqiniso ukuthi (njengezimpendulo eziningi ezibhalwe kulokhu okuthunyelwe) iWindows isebenza neLinux yenza amanzi ezingeni le-hardware - software.
Qaphela, futhi ngingumsebenzisi wamabhithi weLubuntu 32 no-64 ngezizathu zezezimali. Okokuzenzakalela kwehhovisi, I-Linux COMPLIES, kepha ezindabeni zobuchwepheshe: HHAYI FAR.
Ngaphandle kwe-Gimp (kwesinye isikhathi) nokuhlela kwe-3D (i-Blender), abahleli abanjenge-Adobe yizilo zangempela ezinezinkinga ezinkulu zokuhambisana futhi bakude nokunikeza enye indlela ethembekile »ekhokhelwe isoftware ye-«.
Ngenza amakhasi ewebhu: nge-Atom, iGimp kanye neLibreoffice kuyinto kanokusho futhi ngiyohlala ngimbonga uLubuntu kepha kufanele sibonise ukushiyeka kohlelo lweLinux. Futhi lokho bekufanele kube yinhloso ye-athikili, njengokuphaphama: uma sifuna isoftware yamahhala kuzofanele sitshale imali, noma ngabe siyayithanda noma cha (njengoba kwenza iWindows ne-Mac).
Manje u-Isaac, uyafuna ukusiza ukuthuthukisa isithombe seLinux? Kufanele ubhale okuthunyelwe mayelana ne-hardware eyiyo (imakrofoni, amabhodi ...) yemishini efana ne-PC Ofimatica, i-PC Worstation noma i-PC Professional kanye nesoftware efanelekile ngayinye yalezi zinto. Ngakho-ke uzokhombisa ngezimpikiswano eziqinile hhayi ngokuhlola okuzithobayo izinzuzo ZANGEMPELA zenkululeko yeLinux ngeWindows.
Ngiyabonga nonke ngokufunda umbono wami othobekile.
Phendula ekhasini leNachete
Ngiyakuhlonipha konke ukuphawula ebengikufunda ... Kepha ukugxeka okuningi engikubonayo kubangelwa yi-GNU / Linux futhi empeleni kuyizinkinga zabathuthukisi be-software abanjengo-Autodesk, i-Adobe, iMicrosoft, njll., Noma abenzi be i-hardware enganikeli ngamashayeli we-Linux. Kepha akuyona inkinga yeLinux uqobo ... Kungani ungakwenzi? Ngoba abekho abasebenzisi abaningi njenge-Windows futhi ayizuzi kangako. Kepha, ngiyaphinda, akuyona inkinga yeLinux uqobo noma yefilosofi yomthombo ovulekile noma wamahhala. Iningi lokugxekwa kwendatshana kubangelwe ukungazibophezeli kwabathuthukisi bezinkampani ezithile.
Gxeka izinto ezihambisana neLinux uma zikhona, kepha lolu hlobo lokugxeka mhlawumbe kufanele ulwenze kulabo abangathuthukeli iLinux, hhayi umphakathi noma mina. Tshela lokho ku-Adobe, Autodesk, nakwezinye iziqhwaga zesoftware, imidlalo yevidiyo, njll.
Yini iLinux engasebenzi? Yini iWindows esebenzayo? Bengisebenza ngokusemthethweni ngeLinux iminyaka futhi anginankinga. Ihhovisi? Ungasebenzisa i-Office online noma i-Google Docs ... noma usebenzise iwayini, njll. Futhi ngeshwa kwesinye isikhathi kufanele ngithinte amakhompyutha e-Windows angilethelayo ukuze ngilungise futhi ayazonda. Isibonelo, kungani ukuba ngumlawuli nokuphoqa ukususwa kwefolda kukhonsoli kungakuvumeli? !!! Kungani lawo reboots evuselela? !!! Kungani ngithole inqwaba yamakhompyutha anezinkinga ngemuva kokuvuselelwa kweWin 10? !!! ... uma konke kusebenza kahle ...
Imikhuba? Uma ngithola umholo kwiLinux Foundation noma i-FSF, noma umholo wami uncike ekuthengisweni kweLinux noma isoftware yamahhala ... Mhlawumbe kungaba ngumsindo. Kepha akukho okunye okunjalo. Futhi NGIMAHHALA ukusebenzisa iWindows noma iMac futhi lapho ngifuna. Kungani ungakwenzi? Ngoba eLinux ngizithola ngikhululeke kakhulu, noma ngabe kukhona abantu abakhathazwa yilokhu ...
Njengoba ngiphinda kokuthunyelwe kwami ​​kwangaphambilini: kungumbono wami othobekile.
Kepha u-Isaac, iqiniso ukuthi abantu bafuna ukuthi ikhompyutha yabo isebenze, isikhathi. Abafuni ukuba nzima ngezinkinga zokungahambelani ... futhi ngikhuluma nawe ngokuhlangenwe nakho ngoba ngifakele abambalwa abambalwa be-Ubuntus (Mate, eneGnome neLubuntu) womabili ama-32 kanye nama-64 bits kuma-laptops nakuma-PC ... kwathi ezinsukwini ezinhlanu kamuva bangincenga ukuthi ngicela ufake iWindows futhi ngoba isikrini besimnyama noma sinemivimbo emibalabala (i-NVIDIA ne-ATI), ayenzanga ukuxhumana okulungile kwe-VPN ukusebenza, bekungekho msindo, ayibonanga ikhadi le-Wi-Fi noma ibihlala ilahlekelwa ukuxhumana.
Vele, akusizi ukwenza i-hardware ihambisane ne-Linux ngoba ababaningi abasebenzisi, ngakho-ke bazobuyela emafasiteleni…. futhi kubi kangakanani amawindi (noma i-MAC) ... futhi kuzohlala kuyindaba efanayo ... ngaphandle kokuthi iLinus Torvalds kufanele iguqule ukwakheka kwayo kwe-kernel ngokuya ngehadiwe, noma mhlawumbe kufanele ixoxe "nabangane" bayo be-NVIDIA noma i-ASUS ... yize Ngiyesaba ukuthi lokho kuzoba yingozi yesitimela ngoba angiboni muntu engalweni yakhe ezosonteka.
Futhi akulona iqiniso elincane ukuthi ukukhuluma "nalabo bangane" (funda izinkampani) kubukelwa phansi emikhakheni ethile yesoftware yamahhala yezinqubomgomo zabo zesoftware ephathelene.
Empeleni, kuyadabukisa kakhulu, ngoba kuliqiniso ukuthi iLinux uhlelo oluhle futhi luyindlela enhle (futhi ngingumsebenzisi, qaphela), kepha iqiniso ukuthi uma lingasetshenziswanga kahle kwi-hardware alinalusizo ngoba alusoze lwenziwa ngeziqinisekiso. Futhi yingakho isabelo esingu-3%, ikakhulukazi kwimishini ebonakalayo ... futhi-ke, i-Adobe ithi: »ngeke kube yi-«.
Futhi akudingekile ukuyokhuluma nabo noma nge-Autodesk, noma Avid ukwazi KADE isabelo semakethe se-Linux kernel (abazona izilima).
Enye into amaSeva. Lapho, kanye nomngani wakhe uKerberos, izinto ziyashintsha. Bayazivikela.
Ngokuqondene nokuvuselelwa, iLinux yehluleka. Futhi sengibonile futhi ngahlupheka bobabili emishinini engama-32 nengama-64. NeWindows futhi (ngiyayazi i-W10 engena ku-loop yephakeji yokuvuselela, kepha njengoba kunguhlobo lwasekhaya, ayinayo i-GPO yokubakhubaza).
Akuwona wonke umuntu owaziyo ukuthi yini iwayini futhi abantu abafuni ukwazi noma abanalo nhlobo ulwazi mayelana nezinhlelo zewindows ku-linux. Eqinisweni bayangitshela: yini leyo? ... futhi uma ubachazela bathi: cha, cha, yiyeke. By the way, kufanele ube kusuka ku-I3 naku-8gb weRam ukuze usebenzise iwayini kalula, noma kunjalo kuya ngohlelo lwakho olisebenzisayo.
Ngakho-ke, ngokuqedela. I-Linux ayingihluphi. Eqinisweni ngibhala ngivela ku-Lubuntu 64 bits nge-firefox. Futhi ngikhululekile ngoba ngikwazi ukusebenza nenye iWindows ne-Mac.
Izizathu zokungasebenzisi iWindows zizoba ziningi kepha iLinux inenkinga enkulu futhi iyahambisana, iWindows ne-Mac ezisingatha kangcono kakhulu.
Futhi inqobo nje uma iLinus Torvalds ingasitholi isixazululo, kuzoba uhlelo oluncane lomphakathi futhi olungabalulekanga kangako konjiniyela kuzo zombili i-hardware ne-software ... bese uqala phansi.
Wozani, ngibingelele wonke umuntu.
UMephisto Feles kusho
Lapho labo abangenakho okuningi abangakusebenzisa futhi abangakuvumeli ukuba semthethweni, bathola into eseceleni futhi bafune umuntu ozobafakela iWindows. Lokhu kubatshela ukuthi i-XP, yinhle kakhulu kepha isivele ingasasebenzi, ukuthi i-8 iyesabeka, i-8.1 ibi kakhulu nokuthi kwabangu-10 kube nezinkinga kuphela nokuthi azikho izishoshovu ezinhle. Ngemuva kwalokho okuwukuphela kwendlela esele kumsebenzisi ompofu ukufaka iWindows 7. Emva kwesigamu sehora ufake imodeli entsha sha yeWin 7, 2012 enezibuyekezo ezizenzakalelayo ezikhutshaziwe ukuze iMicrosoft ingayitholi futhi ingasebenzi. Leli windi elincane lapho likutshela khona ukuthi "ikhophi le-Windows akuyona eyangempela libi kakhulu…." Okulandelayo ukuzivikela ngangokunokwenzeka ngohlelo oluneminyaka engu-7 ngaleso sikhathi kodwa olungalwazi. Ukubona nje ukuthi ivuliwe futhi kuyasebenza kuyeneliseka. Yini umehluko nomsebenzisi wezinhlelo zokusebenza zamahhala….
Phendula uMephisto Feles
Nina basebenzisi be-linux kufanele nikwamukele ukuthi i-linux kungenzeka ingafinyeleli kumasheya emakethe anayo i-lunux, hhayi ngoba ingcono kepha ngoba kulula ukuyisebenzisa kumsebenzisi ojwayelekile kunabantu abaningi emhlabeni.
Njengoba ilayisense lewindows unomuntu ozokhononda kuye uma kukhona okungahambi kahle futhi unesiqinisekiso, nge-linux akunjalo, futhi njengoba kubuhlungu ukwamukela abasoze baba nalokho amawindi anakho ezingeni lomsebenzisi, kuzofanele bakhokhele abasebenzisi abambalwa be-linux ukuthi ay futhi iphathe kwezinye izici (amaseva, amaselula noma kumasistimu wokuzulazula) iwindi lizohlala lithanda umsebenzisi ojwayelekile
(2) Isoftware ingaba yi-cross-platform, isibonelo, i-micro-editor kuze kufike ku-qbittorrent, njll. … Uma udinga isoftware ekhethekile, khokhela, ngoba kufanele kube yinkinga… I-Hello World yakudala! Kuyakufanelekela ukuyiguqula, ukusabalalise futhi ufunde okuqukethwe kwayo 🙂
(3) i-macOS iqinisekiswe njenge-UNIX, iphephe nge-100% ... i-Android, bayibeka njengeLinux, iphephe nge-100%. Ukucushwa kokuzenzakalelayo kokunye ukusatshalaliswa kusho ukuphatha i-firewall ngama-iptables / nftables ... Ngiyangabaza ukuthi ushintsho olusuka ku-Windows luye ku-Linux lusebenzisa isakhi sofuzo esisiphatha sonke ngaphakathi ... Ezinye zifaka i-GUFW, kwimodi ye-OFF, kepha nansi ... Manje sikhuluma ngayo ukumiswa kwe-sshd_config, ngiyabuza, ukuxhumana nge-default port, 22, nokungena ngemvume nge-password, kuphephile? … Kungani umsebenzisi wasekhaya angafuna ukuthi insiza isebenze?
Omunye uzibuze ukuthi kwenzekani ngamaseva we-linux, ucabanga ukuthi aphephile ngo-100%? Kuzoba nesizathu esithile sokufaka isigaba sokuphepha ku-Debian handbook noma i-ArchLinux wiki.
(4) Kungani ngingeke ngifune ukuletha imibiko yesiphazamisi ku-Debian (reportbug)… Uma ukhathazekile nge-telemetry kumadivayisi akho, thola.
(5) Kulungile, ngingasebenzisa i-Openbox ku-pentium 4, kepha njengoba ngifaka imigqa eminingi ku-autostart, imemori engaphezulu ye-RAM isetshenzisiwe ... Izinsizakalo eziningi zenziwe zasebenza, imemori engaphezulu ye-RAM ... Ne-software ... ngikhululekile nge-GTK + 2 ... Kepha ku kwesinye isikhathi kuzofanele ngifudukele kuzinhlelo zokusebenza ezihlanganiselwe i-GTK + 3 ... Isoftware iyaguquka, osebenza naye, ngisho naseLinux ... Noma ihamba kancane, 🙂
(6) Uma kuliqiniso, ukwehluka kwehlukanisa iLinux… Noma kuyiphuzu lokushayisana.
(7) Ngiyifingqa, lapho iDebian 10 iphuma, thina bomakadebona sibona okwenzekayo kumakhompyutha wabasebenzisi abanamakhono amancane nabangazinzile, futhi lapho kufika isikhathi sokuvuselela, sifunda amanothi okukhishwa, ukuze singabuzi izinto eziwubuphukuphuku, iphedi yokuthinta iyasebenza, ngibona isikrini esimnyama, njll. ... Umuntu othile uzibuza ukuthi kwenzakalani ekusakazweni okufana ne- "rolling release" ... Uma iSlackware 15 ingahle iphume, ngizokwazi ukukhuphula kusuka ku-14.2 noma kungabandakanya ukufaka kabusha?
"Futhi, njengoba bengadumile kangako, kune-malware encane yabo."
Ungazididanisi izinto, ukuthola izinsongo eziningi ohlelweni olusebenzayo akulwenzi luphephe ngokwengeziwe, ukuba yisoftware yamahhala nomthombo ovulekile we-OS, uma abasebenzisi bewina, bangathuthukisa ukuphepha kwabo ngoba izinsongo eziningi zingabikwa phakathi kwezinto eziningi futhi nakanjani i-OS Okufana ne-Unix kuphakeme ngokuphelele kuneMicrosoft ngazo zonke izindlela (ikakhulukazi iFreeBSD)
Ikhishwe inguqulo entsha yeFedora 30
I-Cloud Computing: Ububi - Olunye uhlangothi lwemali!